Inganekwane Yesabelo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 15, 2016 Douglas Karr
Esinye sezilayidi engixoxa ngaso cishe kuzo zonke izingxoxo enginaso namabhizinisi yilesi engisibiza ngokuthi inganekwane yesichasiso. Kunoma yiluphi uhlelo lokulinganisa, sikhetha imithetho yokuziphatha ebushelelezi nengafani. Uma lokhu, ke lokho. Kuyinkinga, nokho, ngoba akwenziwa kanjalo ngezinqumo zokuthenga. Akunandaba ukuthi ungumthengi noma ngabe uyibhizinisi - akuyona nje iqiniso le- Ukuhamba kwamakhasimende.
Indaba eyiphutha ukuthenga kwami ​​i Ama-Amazon Echo. Ngibone i-buzz online lapho iqala ukwethulwa, kepha bengingenaso isidingo sayo. Ngaleso sikhathi, nami ngangingeyena umsebenzisi oyinhloko. Kepha ngenkathi ngithuthukisa ukuthengwa kwebhizinisi lethu kuya e-Amazon, ngijoyina uNdunankulu, futhi ngithola ukuthunyelwa kungakapheli usuku, isimo sami se-Amazon sashintsha.
Bengingazi okuningi nge Ama-Amazon Echo, noma kunjalo. Ngolunye usuku ku-Facebook, UMark Schaefer ubeke umbono othakazelisayo. Ubalule ukuthi ubekhuluma ne-Amazon Echo yakhe ngokungathi ngumuntu osegumbini. Njengobuchwepheshe be-tech geek ne-Amazon, ngangihlaba umxhwele.
Isici Sokuqala Sokuthinta
Ngokobuchwepheshe, ngingathi lokho bekungukuthinta kokuqala kohambo lwamakhasimende ami. Ngisuke ku-Facebook ngaya e-Amazon lapho ngifunde khona ikhasi lomkhiqizo. Bekubukeka kuhle impela kepha angikwazi ukufakazela izindleko ngaleso sikhathi. Ngibe sengidlulela ku-Youtube ukubona ukuthi hlobo luni lwezinto ezipholile abantu ababezenza ngaphandle kwento yokukhangisa.
Ngabuyela e-Amazon ngafunda izibuyekezo zenkanyezi e-1 futhi angibonanga lutho oluzongivimba ekuthengeni le divayisi… ngaphandle noma ngentengo. Angikwazanga ukuthethelela ithoyizi elisha ngaleso sikhathi.
Esontweni elilandelayo noma lapho ngizula kuwebhu, ezinye izikhangiso zokukhangisa kabusha ze- Ama-Amazon Echo kwavela. Ekugcineni nginqotshwe kwesinye sezikhangiso ngathenga le divayisi. Ngingabhala izigaba ezimbalwa ngokuthi ngiyithanda kangakanani, kepha lokho akuyona inhloso yalokhu okuthunyelwe.
Inhloso yalokhu okuthunyelwe ukuxoxa ukuthi ukudayiswa kwale Amazon Echo kuzofakwa kuphi. Uma kungukuthinta kokuqala, kungashiwo kuMark njengothonya… yize engeyena umthelela wamadivayisi nobuchwepheshe. Ngingasho ukuthi ukuphawula kukaMark nge-Echo bekuyisenzo sokuqwashisa ohambweni lwami lwamakhasimende. Akukho lapho ngaphambi kokuphawula kukaMark bengazi ngobuciko be-Echo nokuhlukahluka kwezici.
Uma imodeli yesibambiso kungukuthinta kokugcina, ukukhangisa okukhokhelwayo nokumaketha kabusha kuzoba ngumthombo wokuthengisa. Kepha empeleni babengekho. Uma ungibuza ukuthi iliphi isu lokumaketha elingikholisile ukuthi ngithenge i-Echo, ngingaphendula:
Kwakungeyona isu elilodwa lokho kwangenza ngathenga i-Echo, kwakuyibo bonke. Bekungukuphawula kukaMark, bekungukufuna kwami ​​amavidiyo akhiqizwe ngumsebenzisi, bekuwukubuyekeza kwami ​​izibuyekezo ezingezinhle, futhi bekuyizikhangiso zokumaketha kabusha. Ngabe lokho kungena kanjani kufaneli yokuguqula yeGoogle Analytic? Akukwenzi… njengoba kungahambi kakhulu ohambweni lwamakhasimende.
Ngibhalile mayelana isikhalazo esikhulu sokumaketha kwangaphakathi futhi isichasiso siyisihluthulelo.
Kukhona okunye kodwa kuyinkimbinkimbi impela. Ukuqagela analytics ingabuka ukusebenza kokuthengisa kuwo wonke ama-mediums namasu futhi njengoba wenza izinguquko, ingaqala ukuhlanganisa umsebenzi ofanelekile ekuthengisweni konke. Lezi zinjini zingabikezela ukuthi ukwehlisa noma ukukhulisa isabelomali noma umsebenzi kucebo elithile lokumaketha kuzoba nomthelela entweni ephelele.
Njengoba ubheke emizamweni yakho yokumaketha, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ngisho nokumaketha okungenakho ukuguqulwa okubhekiswe ngqo kunomthelela jikelele enqubweni yokwenza izinqumo yekhasimende. Futhi umthelela ungaphezu kwemizamo yethu yokumaketha - konke okuhlangenwe nakho kwethemba kunomthelela ohambweni.
Nasi isibonelo esilula: Unesitolo futhi usika abasebenzi bakho bokuhlanza. Akukona ukuthi isitolo sakho singcolile, kepha mhlawumbe asinabala njengakuqala. Umphumela uba ukuthi abathengisi bakho behle njengoba abathengi abaningi be-finicky bengazizwa sengathi ihlanzekile njengesinye isitolo sendawo. Ukwenza kanjani lokhu emizamweni yakho yokumaketha? Kungenzeka ukuthi ukhulise imali oyisebenzisile ukumaketha ngalesi sikhathi kodwa ukuthengisa jikelele kwenqabile. Ayikho into “ehlanzekile kakhulu” kubhajethi yakho yokumaketha… kodwa uyazi ukuthi inomthelela.
Namuhla, izinkampani zidinga isisekelo sokuqukethwe. Kusuka kuwebhusayithi ehlanzekile, ephendulayo, kuya kuma-athikili aqhubekayo akha ukwethembeka kwabo, ukusebenzisa amacala, amaphepha amhlophe, kanye ne-infographics. Konke okwabiwe, kanye nenani elengeziwe ngeziteshi zomphakathi. Zonke zenzelwe izinjini zokusesha. Konke okufaka isandla kwi-newsletter ye-imeyili eletha ithemba.
Kubucayi kakhulu - ayikho eyodwa oyidayisela enye. Ungahle ufise ukulinganisela ngokufanele njengoba ubona umthelela wazo, kepha akekho ongazikhethela ebukhoneni be-inthanethi obugcwele.
Tags: amazon echoisenzookokuqala-thinta isichasisomarketing kwangaphakathiokokugcina okuthinta isichasisoinganekwaneinganekwane yesichasisoi-analytics yokubikezelaisibikezelo sokubikezela
Ungayisebenzisa Kanjani Intengo ye-Algorithmic ukukhulisa inzuzo
Ukubeka intengo: Isebenza kanjani intengo ye-Amazon nokuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani